Ihe ị ga-ahụ na Madrid n'otu ụbọchị | Akụkọ njem
Mariela Carril | 28/12/2021 17:00 | Madrid, Ihe ị ga-ahụ
Ị nwere ike ịmata obodo n'otu ụbọchị? N'ezie ọ bụghị, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ị nwere ike ghara ịmata ya kpam kpam na otú obodo kwesịrị ... ma e nwere mgbe ọ dịghị ụzọ ọzọ na ị ga-mara otú iji uru nke ndị awa.
Madrid n'otu ụbọchị... kedu maka?
Madrid n'ime awa 24
Ị kwụsịrị na Madrid n'ụzọ ụfọdụ ma nwee naanị otu ụbọchị iji mee obere laps? Kedu ihe ị ga-ama n'oge dị mkpirikpi? Kedu ka ị ga-esi nweta ihe kacha mma na ya? Ọ dị mfe, họrọ naanị ihe nkiri kacha ewu ewu.
Ma eleghị anya, ị si n'ime ime obodo ahụ, site na mba agbata obi ma ọ bụ n'akụkụ nke ọzọ nke Atlantic, ọ dịghị mkpa, ma ị ga-enweta ya. Multi Kaadị iji ụzọ ụgbọ oloko dị ka ụzọ ụgbọ njem ngwa ngwa. Gbakọọ na iji nọrọ awa 24 na isi obodo Spanish, ị ga-achọ opekata mpe abụọ tiketi, ma ọ bụrụ na ị rutere Barajas (otu n'èzí na otu azụ n'ọdụ ụgbọ elu), ma na nke ahụ ị ga-agbakwunyere di na nwunye ọzọ iji nweta ebe nkiri Madrid. Ọsọ ọsọ.
Enwere ahịrị metro 12 na Madrid, na mgbakwunye na ụgbọ ala, ụgbọ oloko na ahịrị tram, mana iji mee ka ọ dị mfe metro dị mfe n'ihi na njem a na-ejikọ ebe nkiri kachasị ewu ewu nke ọma. O doro anya, ọ bụrụ na ị na-enweghị ike ịga ije mgbe niile.
Obodo etiti bụ Ọnụ Gatezọ Sunmá AnyanwụYabụ ọ bụrụ na ịnọ n'ọdụ ụgbọ elu ị nwere ike iji netwọk metro pink, 8, gaa Nuevos Ministerios. Site ebe a were ahịrị anụnụ anụnụ gawa Puerta del Sol wee pụọ na Tribunal. Site n'ebe ahụ ị na-agbanwe gaa na ahịrị celestial, nke 1, na n'ikpeazụ ị ga-agbada na Sol na Ọ bụ mmalite dị mma ileta kacha mma na Madrid n'otu ụbọchị. Na mkpokọta ọ ga-abụ njem ọkara elekere.
Ihe kachasị mma bụ malite na ije site na etiti akụkọ ihe mere emeỌ bụ ọmarịcha foto obodo na akụkọ ihe mere eme ya. N'ime Main Square, kwa ụbọchị, a na-enwekarị ndu nwere nche anwụ ọcha ndị na-achịkọta ma na-eduzi ndị njem nlegharị anya, ma Spanish na Bekee.
Ụdị njegharị ndị a na-ewe ihe dị ka awa atọ na cỊ ga-ahụ Plaza Mayor, Mercado de San Miguel, Gran Vía, Almudena Cathedral, Convent nke Carboneras Sisters na Puerta del Sol.
Ị nwere ike ịme ndoputa maka oge dabara gị mma ma ọ bụ ị nwere ike pụta ma sonye na otu a na-etolite. Ọ bụ njem nlegharị anya n'efu, ma a na-anabata ma na-atụ anya onyinye. Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa ụdị njem a haziri ahazi, naanị gaa na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya. Ị nwere ike werekwa a Njem Segway ma ọ bụ njem akụkọ ihe mere eme nkeonwe. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị gị na ndị nduzi na ị chọrọ ịbụ rụrụ mgbe ahụ ị nwere ike mgbe niile na-eme onwe gị ụzọ.
Buru n'uche echefula Prado Museum, Retiro Park, Neptune Fountain, Sainte Jerome Katidral, na Plaza del Ángel na Casa de Cisneros. na mgbakwunye na ihe m depụtara n'elu. Na ezigbo map ndị njem nlegharị anya ị gaghị enwe nsogbu. Ma n'ezie, ụzọ n'ikpeazụ dabere na mmasị gị.
Dịka ọmụmaatụ, nka na-amasị gị Mgbe ahụ Museo del Prado, Reina Sofia na Thyssen-Bornemisza ha ga-abụ ee ma ọ bụ ee na ndepụta gị. Ha na-etinye uche na nka kacha mma ebe a na Madrid, mana ị gaghị enwe oge ịhụ ha niile hụ mkpokọta kacha amasị gị wee kpebie. Ọtụtụ na-ahọrọ Reina Sofía n'ihi na ebe a bụ Guernica na-ewu ewu site na Picasso, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọzọ n'ozuzu, Prado Museum bụ nhọrọ kacha mma.
Ụlọ ihe ngosi nka nke nleta na-eme ka ike dị ike, ọ bụ eziokwu, ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ nkà maka gburugburu ọzọ na ihu igwe dị mma, ọ ka mma ịnọ n'èzí. Maka nke ahụ ị nwere ike gafere Paseo del Prado wee hụ ogige ezumike nka na ulo uka eze. Ọ bụrụ na ị maralarị ihe ị ga-eme, enwere ọtụtụ tiketi ị nwere ike zụta tupu oge eruo.
Plaza Mayor bụ isi osimiri na ọ bụ ebe ị na-agaghị echefu n'otu ụbọchị na Madrid. Ọ nwere akụkụ anọ, ụlọ ndị mara mma gbara ya gburugburu, nwere ihe karịrị mbara igwe 200, nwere ihe oyiyi Eze Felipe nke Atọ site na 1616… ebe ọ bụla ị na-ele ya, ọ na-ama mma. Enwere ọnụ ụzọ mbata nke itoolu, nke bụbu ọnụ ụzọ ochie mana taa nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke ị ga-atụgharị n'okporo ụzọ ndị gbara agba nke etiti ahụ.
N'etiti ụlọ elu abụọ e nwere ọmarịcha fresco, Casa de la Panadería, na chi nwanyị Cibeles na alụmdi na nwunye ya na Attis, yana nkọwa ndị ọzọ na-anọchite anya akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ. Ọ bụrụ na n'oge a nke ije ọ bụ ugbua ehihie mgbe ahụ ọ kacha mma ịnọdụ ala rie ụfọdụ tapas na Mercado San Miguel Ọfọn, ikuku ebe a kacha mma. Ebe enwere ahịa ndị ọzọ na isi obodo Spanish N'ihe gbasara gastronomic, a na-ewere nke a dị ka otu n'ime ihe kacha mma.
Mkpakọrịta na 1916, ọ bụ ihe owuwu ebe ígwè na-emeri na eziokwu bụ na ọ na-enye ihe niile site na azụ ọhụrụ ruo ezigbo bonbons chocolate. Na n'ezie, kacha mma ham. Puerta del Sol bụ kilomita 0 nke Spain na ọ bụ otu n'ime ọnụ ụzọ ámá kacha mkpa nke Madrid ochie na narị afọ nke XNUMX. Taa, ọ bụ ogige dị ndụ nke nwere ọtụtụ ihe ncheta na ụlọ dị mkpa.
Foto dị mma dị n'akụkụ uwe agha nke obodo ahụ, The Bear na Strawberry Tree, dị nnọọ ná mpụga ọnụ ụzọ ụgbọ oloko. Site ebe a ị nwere ike gbadaa Calle Mayor chere ihu osimiri na-aga site na Ụlọ ihe nkiri Royal, Royal Palace na Almudena Cathedral.
O doro anya na ị gaghị enwe oge iji ghọta ọmarịcha ime ya mana jide n'aka na n'èzí ha dịkwa egwu. Dabere na Gran Via Ọ na-elekwasị anya ụdị ndị kachasị ewu ewu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọzọ boutique ị nwere ike ịga n'akụkụ Chueca na Malasaña, na obere okporo ụzọ ha na obere ụlọ ahịa ha.
N'ịbụ onye meworo njem a, eziokwu bụ na ị ga-etinye oge buru ibu nke ụbọchị ahụ, na-agụta oge maka nri ụtụtụ na nri ehihie na gịnị kpatara na ị gaghị aṅụ kọfị n'etiti ehihie ma zuru ike ụkwụ gị. Ihe dị ka 7 ma ọ bụ 8 ị ga-akwụsịkwa kporie ọdịda anyanwụ. Echiche panoramic nke Gran Vía na ụlọ Metropole sitere na isi mmanya bụ ihe ịtụnanya. ma ọ ga-abụ ihe kacha mma na nnata Madrid.
Isi dị n'elu ụlọ nke Círculo de Bellas Artes, ụlọ elu asaa, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. 360 ° obodo anya, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ya maa mma na-akpali akụkọ ihe mere eme center. Ihe ọṅụṅụ na-adịghị ọnụ ala ma ọlị, doro anya, ma na-enweghị obi abụọ Ọ kacha mma imechi awa 24 na Madrid. Ị gaghị akwa ụta ya.
Ma ee, ị nwere ike ịnọrọ iri nri ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị oke ọnụ, gbadaa n'okporo ámá na ị na-apụ maka tapas. Mpaghara dị mma maka nke ahụ bụ Huertas, yana Casa Alberto ma ọ bụ La Venencia. N'ikpeazụ, ị nwere abalị ma ọ bụ na ị nweghị? Ọ bụrụ na ị nwere abalị iji nwee obi ụtọ mgbe ahụ ị nwere ike ịpụ ịgba egwu, ma ọ bụrụ na ị naghị eso ụlọ mmanya na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Madrid » Ihe ị ga-ahụ na Madrid n'otu ụbọchị